အိန္ဒိယမှအစ္စရေးနှင့်ပူးပေါင်း၍ရေတပ်သုံးလေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးဒုံးစနစ်(naval air defense missile system)
အိန္ဒိယမှ အစ္စရေးနှင့်ပူးပေါင်း၍ ရေတပ်သုံးလေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးဒုံးစနစ်(naval air defense missile system)ဖြစ်သော Barak8(Herbew for Lightning-8) ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Barak-8 အနေဖြင့် တာလတ်နှင့်တာ ဝေးပစ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးစနစ်(Medium- and long-range air defense missile system)ဖြစ် သည်။
ဆက်လက်၍ ရေတပ်သုံးမှ မြေပြင်အခြေစိုက်လေကြောင်း ရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးစနစ်(land-based air defense missile system)ကို ၂၀၁၇ တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မြေပြင်စနစ်တွင် အထိုင်စနစ်နှင့် ရွေ့လျားစနစ်ဟူ၍ ၂ မျိုး ထုတ်လုပ်ပေးထားသည်။ ရွေ့လျားစနစ်တွင် ဘဲလာရုဇ်ထုတ်
၈ စစ်သုံးယာဥ်ကြီးဖြစ်သော MZKT-7301 ၏ chassis အနေဖြင့် ဒုံး ၈ စင်း အား ကွန်တိန်နာအတွင်း ထည့်သွင်း ထားရှိသည်။
ဒုံးများအနေဖြင့် ၂၇၅ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ရှိကာ အလျား ၄. ၅ မီတာ၊ အချင်း ၀. ၅၄ မီတာ အရွယ်အစားရှိသည်။ တပ်ဆင်ထားသည့် ထိပ်ဖူးအနေဖြင့် အလေးချိန် ၆၀ ကီလိုဂရမ် ရှိသော ပေါက်ကွဲအားပြင်း(HE-FRAG)ထိပ်ဖူး ဖြစ်သည်။ ထိပ်ဖူးတွင် proximity fuse ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် ပစ်မှတ်အား တိုက်ရိုက်ထိမှန်စရာမလိုဘဲ ပစ်မှတ်အနီးတွင် ပေါက်ကွဲခြင်းဖြင့် ပစ်မှတ်အား တားဆီးသည်။
Barak-8 ဒုံးများအနေဖြင့် အကွာအဝေး ၇၀/၁၀၀/၁၅၀ ကီလိုမီတာ နှင့် အမြင့် ၁၆ ကီလိုမီတာ ရှိသော ဝေဟင်ပစ် မှတ်များကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားနိုင်သည်။ ဒုံးတွင် မီးခိုးထွက်မှုကို လျှော့ချထားသော rocket motor ကိုအသုံးပြုထား ကာ အသံထက် ၂ ဆ(Mach 2) မြန်နှုန်းဖြင့် ပစ်မှတ်အား တားဆီးနိုင်သည်။ တားဆီးနိုင်သည့် ဝေဟင်ပစ်မှတ်များအနေဖြင့် လေယာဥ်၊ ရဟတ်ယာဥ်၊ ခရုဇ်ဒုံးနှင့် သင်္ဘောဖျက်ဒုံးများဖြစ်သည်။ ဒုံးပစ်လွှတ်မှုအနေဖြင့် ဒေါင်လိုက် ပစ်လွှတ်သည့်စနစ်(vertical launching system- VLS)
ဖြင့် ပစ်လွှတ်သည်။ Barak-8 အနေဖြင့် ရေဒါမှ ဝေဟင်ပစ် မှတ်များကို ဖမ်းယူပြီး အလိုအလျောက်တွက်ချက်ပစ်ခတ်မှု စနစ်ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် ပစ်မှတ်တစ်ခုကို ကြား ဖြတ်ဟန့်တားပြီး ကျန်ပစ်မှတ်များကို ကြားဖြတ်ဟန့်တား ရန်ကြာချိန်မှာ အလွန်တိုတောင်းမှု ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
Barak-8 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်၏ မျိုးကွဲများ အနေဖြင့် Barak-8ER မှာ ၁၅၀ ကီလိုမီတာ အထိပစ်ခတ် နိုင်သည်။ ER ကို Extended Range ဟုဖွင့်ဆိုထားသည်။ Barak-8ER တွင် အလွန်ကြီးမားသော booster တပ်ဆင် ထားသည်။ MR-SAM အနေဖြင့် မြေပြင်အခြေစိုက်ပစ် လွှတ်သော တာလတ်ပစ်မျိုးကွဲဖြစ်သည်။ MR-SAM အနေ ဖြင့် အကွာအဝေး ၇၀ ကီလိုမီတာ အထိ ပစ်ခတ်နိုင်သည်။
MR ကို Medium Range ဟုဖွင့်ဆိုထားသည်။ LR-SAM အနေဖြင့် အကွာအဝေး ၁၀၀ ကီလိုမီတာ အထိပစ်ခတ်နိုင် သော တာဝေးပစ်ဒုံးဖြစ်သည်။ LR ကို Longe Range ဟု ဖွင့်ဆိုထားသည်။ မြေပြင်အခြေစိုက် လေကြောင်းရန် ကာ ကွယ်ရေးစနစ်အပြင် ရေတပ်သုံး Barak-8 အနေဖြင့် အိန္ဒိယရေတပ်ရှိ Kolkata class ဖျက်သင်္ဘောများသာ မက တည်ဆောက်ဆဲ INS Vikrant လေယာဥ်တင်သင်္ဘော တွင်လည်း တပ်ဆင်အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။ အစ္စရေး မှလည်း နောက်ဆုံးထုတ် ကော်ဗက်စစ်ရေယာဥ်တွင် Barak8 ကို modernization plan အရ တပ်ဆင်ရန် စီစဥ်ထားရှိ သည်။
Previous Article ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ပြန်ပေးဆွဲခံရသူအားကယ်တင်စဉ်နယ်ခြားသံဆူးကြိုးတံတိုင်းအောက်၌လျှို့ဝှက်မြေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကိုအိန္ဒိယအာသံရဲတပ်ဖွဲ့တွေ့ရှိ။ ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အိန္ဒိယနယ်ခြားလုံခြုံရေးတပ်တို့ စစ်ဆေးနေ
Next Article ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေးအမြန်သွား စစ်ရေယာဥ်များ FAC(Submarine Chasers)